Newfọdụ Ihe Nleba Google Map Ọhụrụ | Martech Zone
M na-emecha a nkewa saịtị maka a ahịa a izu ụka na kpebiri na nke ugbu a welara (akara ngosi) collections si n'ebe ndị mara mma larịị, kọrọ ọ bụla akụkụ. Mgbe m na-ezumike, ekpebiri m ịmepụta ihe ọhụrụ. Na-eche na budata ihe nrịbama ebe a ma jiri ha maka iji azụmaahịa ma ọ bụ nke na-abụghị nke azụmaahịa… naanị ihe m chọrọ bụ ihe dị mma ekele!
Enwere akụ na ndò, ihe nrịba oghere, akara 0 site na 9 na A site na Z.
Tags: google mapakara ngosi map
Abụ m ọkacha mmasị m maka ịpịgharị na wheel na-aga
Jenụwarị 29, 2008 na 4:30 PM
hey, ekele maka ikwe ka m budata akara ngosi gị ma jiri ha rụọ ọrụ na mmadụ m. nwee obi ụtọ,
Feb 8, 2008 n’elekere 1:57 nke abali
ụzọ na-aga na ndị a akara ngosi, ha dị nkọ. Daalụ maka ibipụta ha.
Nice ke utom!
na-achọ ebe niile maka akara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mana enweghị m ike ịchọta ya.
tnx nke gi enwere m ike itinye ya 😀
ekele maka ịhapụ m ka m budata akara ngosi ..
Ezigbo! Daalụ maka ịme akara ngosi gị maka ọhaneze.
Daalụ maka akara ngosi !! Ha dị ukwuu!
Hey ekele maka itinye ihe ndị a na weebụ maka ndị ọzọ ka ha budata! Ọ bụrụ na ndị ọzọ ga-agbaso ihe nlereanya gị!
Jul 11, 2008 na 4:20 PM
Ndewo, enwere m ike iji akara ngosi akara gị maka maapụ nke usoro mmemme m (http://gpstools.sf.net).
Jul 11, 2008 na 5:06 PM
Akwa! Obi dị m ụtọ na ndị a na-ewu ewu!
Aug 11, 2008 na 5:56 PM
Daalụ Douglas, ndị a na-enye aka na ekele maka ịnye ha maka iji ya na-enweghị eriri!
Aug 11, 2008 na 6:15 PM
Bet nzọ, Mike! More na-abịa!
Sep 6, 2008 na 3: 07 AM
Ana m achọ naanị ụdị akara a na-agụ agụ mana kedụ ka m ga-esi tinye ha na maapụ google m? E nwere ụzọ m ga-esi tinye na nke m ikon ma m nwere ibudata faịlụ na weebụ ozugbo na google map ọ dị ka. Ọ bụghị pro dịka ị nwere ike ịghọta mana enwere m mmasị ịrụ ọrụ na eserese m!
Ọkt 28, 2008 na 9:45 AM
Daalụ nwunye !! Preaty omume ọma mere !!
Dee 9, 2008 na 5: 05 AM
Daalụ maka akara ngosi
Jenụwarị 30, 2009 na 4:51 PM
Daalụ maka akara ngosi!
Enwere m gị kọfị 😀
Feb 10, 2009 n’elekere 5:08 nke abali
Daalụ nke ukwuu maka akara ngosi. Zọpụtara ọtụtụ oge ekele gị.
Daalụ nke ukwuu maka Akara ókwú :)
Aha ya bụ Ian Shannon
Daalụ maka nrịbama. M na-eji nhọrọ nke ndị na-acha uhie uhie gị iji mee ka mkpokọta nlebara anya nke anụ ọhịa na afọ 2 gara aga. Emeela m ngwa ngwa iji mepụta agba ọzọ maka nke ọzọ m na-eji eme ihe maka anụ ọhịa nke mere tupu afọ 2.
Dị ka aro, ị nwekwara ike ịnwe akara na akara ndị ọzọ ( + - * #? . : ) na dị iche iche shadings. Hey ọbụna ọnyá nwere ike ị ga-ekwe omume!
Ihe nrịbama ndị a na-adị ezigbo mma. ekele maka ịkekọrịta ha.
Nnukwu ọrụ. Daalụ maka ịkekọrịta !!!
Sep 13, 2009 na 11:44 PM
Daalụ Douglas, enwere nnukwu!
Sep 15, 2009 na 10: 11 AM
Daalụ maka ịkekọrịta Douglas!
Ọkt 13, 2009 na 3:01 PM
Ana m akpọtụrụ gị n'ihi na m bụ onye okike nke "Akara ngosi akara ngosi", echekwara m na ị nwere ike ị nwere mmasị ikwu maka ọrụ m na blọọgụ gị.
Nchịkọta ihe ngosi akara ngosi bụ mkpokọta akara ngosi 300 n'efu maka akara akara gị. Nwere ike itinye ha n'aka gị na Maapụ Google gị na njirimara "Maapụ m", ma ọ bụ jiri akpaghị aka jiri Google Maps API.
Hazie na agba, ị ga-enweta mkpokọta akara ngosi, dịka sinima, ụlọ akwụkwọ, akụ, ụlọ oriri na ọ jụ jụ Japan na ụlọ ahịa akwa.
Hụ akara ngosi ndị ọzọ ebe a: http://code.google.com/p/google-maps-icons/